A ciyaaryahan warbaahinta casriga wanaagsan u baahan yahay inay buuxiyaan shuruudaha dhowr ah, sida taageeraya tiro balaadhan oo ah qaabab, isagoo interface ah user-friendly iyo dareen leh oo ay awoodaan in ay Cudarada iyo ciyaaro subtitles. Waxay leeyihiin in ka badan Cinwaan fursadaha Iyada oo, si fiican u ahaa, Muuqaal kale oo ka mahad waxaa si toos ah raadinaya subtitles online. Ciyaartoyda warbaahinta hoos ku qoran u hoggaansamaan inta badan dalabaadka ee kor ku xusan oo dhan oo iyaga ka mid ah waa lacag la'aan.
Wondershare Waa goosin ka mid ah software ciyaaro qaabab file warbaahinta kala duwan; sida faa'iidada ugu weyn, waa miisaanka yar oo si sahlan loo isticmaali. Users mahad looks ay wanaagsan, taageeray shaqeynta fiican. Badhamada fiiriyo oo aad u quruxsan, oo ay si cad oo si xirfad leh loo soo agaasimo oo iyagu ma ay faragelin loo maqli ah. Wondershare Player Ugu rarataan culaysyo files kala duwan Cinwaan, sida SRT, dameer oo SSA. Ciyaaryahanka Tani bixiya badan muuqaalada u user celcelis ahaan waa lacag la'aan.
KM Player waa aalad si weyn loo-mahadnaqayo haya'ad kala duwan audio iyo video qaabab. Waxay leedahay codec gudaha u gaar ah, waa ay awoodaan in ay ku ordi kombiyuutarada processor hooseeyo oo lagu rakibay nidaam DirectShow mudnaan oo doorteen oo ahmiyad gaar codecs agagaarka nidaamka qalliinka. KM Player kuu ogolaanayaa inaad u astaysto subtitles via sanduuqa gacanta ku ah suuragelinayo in aad u hagaagsan oo-ka-u hagaagsan files Cinwaan inta lagu guda jiro loo maqli karo. KM Player furan yahay il-software.
3. Media Player Classic Home shaneebada
Media Player Classic waa barnaamij u furan-il u ciyaaro audio iyo video files. Waa uu jecel yahay ee isticmaala qiimaynaya interface aad u fudud oo door bidaan codsi u fududahay in la isticmaalo. Si ka duwan Windows Media Player, waxa ay ku salaysan yahay kii on, waa cadaalad ah hagaajinta iyo Eebay noocyo kala duwan oo audio, video iyo image qaabab. Marka laga subtitles, nooca ugu dambeeya ee ciyaaryahankaan ay gacanta ku Cinwaan qaraabo dhaqanka renderer in anamorphic video, waxa ay u ciyaara subtitles ee xal il video sida VSFilter oo bixiya magacyada wargelin ah u subtitles dibadda mahad VSFilter ah.
BS Player waxaa loo arkaa by users badan ciyaaryahan warbaahinta ugu wanaagsan lacag la'aan ah oo adduunka ah. Marka hore sii daayay sanadkii 2000, waxa uu ahaa doorashada malaayiin dadka isticmaala oo dunida ah. Waa lacag la'aan ah ama sida version Pro, taas oo kharash 29,90 euro heli karo. Version ayaa lacag la'aan ah ay ka badan tahay lagu qanci karo oo ku timaadda load weyn ee qaababka. The qaabab Cinwaan ay taageerto yihiin MicroDVD, SubRip, SubViewer, MPL2, dameer, SSA, SRT iyo VobSub. BS si toos ah u muuqataa Player u subtitles online oo aad qabto oo kaliya in ay doortaan mid ama ka badan via daaqad ay bixiyaan ciyaaryahanka.
VLC Player waa aalad software ay diyaariyeen urur aan faa'iido doon ahayn oo ka kooban dad iskaa ah, si aad ku raaxaysan karaan qaababka ay dad badan oo lacag la'aan ah. Waxaa waddaa on dhammaan hababka ka hawlgala, waxaa u ciyaara codecs ugu aan u baahan baakad codec, oo u qabata diinta warbaahinta iyo kuwo liita. U baahan tahay in subtitles in karti loo by users oo ay si fudud u waxbaa laga beddeli karaa.
A ciyaaryahan warbaahinta cusub, Kantaris haatan u ciyaara version 0.7.7 oo sii in la hagaajiyo. Waxaa haboon bilowga ah iyo dadka isticmaala khibrad iyo sidoo, waxayna ku xiran tahay baahida kasta user ee. Waxaa ku jira shaqooyin badan iyo waxyeelada muuqaalaynta fiican marka ciyaaro files audio. Kantaris sidoo kale ka heli subtitles online oo iyaga synchronizes in file video ah. Muuqaalka gaar ah waa in Deji subtitles qof loo aqoonsaday si characters waxaa lagu soo bandhigay sida saxda ah.
GOM Media Player waa utility oo lacag la'aan ah kaas oo barbaro dareenka ka tan iyo bilowgoodii oo oofiyey filayo dunida '. Kadib markii geedi socodka ah rakibidda fudud oo degdeg badan, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u helaan interface soo jiidasho iyo dareen GOM ee. Waa tababare playlist wanaagsan, waxaa Eebay ku dhowaad dhammaan qaababka, iyo version kasta yimaado iyada oo taageero Cinwaan horumarsan waayo-aragnimo user fiicnayn.
An ciyaaryahan aad u fiican warbaahinta xorta ah ee Windows iyo Linux, SMPlayer waxaa shahaado sidii 100% free of spyware, adware iyo fayrusyada. Marka loo eego codsiyada kale ee la midka ah, waxay kuu ogolaanaya in aad si aad u eegto clips YouTube si toos ah uga furmo suuqa ugu weyn. Waxaa ku qalabeysan yahay oo dhan muuqaalada u oolli-jirin ciyaaryahan warbaahinta casriga ah - user saaxiibtimo, abuurista iyo maamulidda playlists, qalab gol leeyahay iyo finder ah Cinwaan oo baadhaa dhex subtitles Internet saldhig xogta iyo hubisaa filim kaamil ah daawashada habeenkii.
Khafiif, oo lacag la'aan ah, oo dabacsan - kuwani waa hantida ugu weyn ee Zoom Player. Waxaa jira ku dhawaad ​​jirin qaab ma ciyaari karaan (video, audio iyo image) oo ma user aan qaban karaa. Marka aad la iilanin in hab maqal ah, ciyaaryahanka si toos ah jarto hab Falanqeynta si aadan kashkaaashmaan aad desktop la meel aan la isticmaalin ka. Yarey Player ayaa taageero xySubFilter u dhamaystiran Cinwaan ciyaareed xal marka haya'ad hoose videos xal, oo lagu daray in aad ku raaxaysan doonaa fursado badan Cinwaan Customization.
Banshee furan yahay-il oo bilaabay ciyaaryahan music for Linux ah. Waxaa waxaad fartaan Wannaagga oo maalmahan u ciyaara labada muusig iyo cajallado fiidyow, waxa ay ka qabtaa podcasts iyo durdurrada radio. Waxaa dhoofista warbaahinta si dhakhso ah oo kasoo muuqday taageero u gundhig iyo dibadda-file subtitles. Waxay sida caadiga ah ku yimaadda pre-rakibay la Ubuntu. Waa in ka badan ciyaaryahan warbaahinta aasaasiga ah; sidoo kale waa nidaamka maamulka warbaahinta ah. Si aad u koobo app, Banshee sidoo kale waa miisaanka yar oo si sahlan loo isticmaali, xaaladaha khasab tahay in ciyaaryahan kasta warbaahinta casriga ah.
Top 10 Cinwaan Translators
Sidee baan ku dari kartaa subtitles in My Videos 001
Top 5 HD (High-qeexidda) Video ayeey Software
Divx Editor: Sida loo Edit Your Divx Files in Windows iyo Mac
> Resource > Video > 10 Video Players in Cudarada karo iyo Play subtitles